Rasmi: Goos gooska filimka Badla oo lasoo bandhigay Amitabh iyo Taapsee filimkooda indhaha lagama qaadi karo (+Video) – Filimside.net
Rasmi: Goos gooska filimka Badla oo lasoo bandhigay Amitabh iyo Taapsee filimkooda indhaha lagama qaadi karo (+Video)
Superstar Amitabh Bachchan iyo atirishada hormarka wacan sameeneyo Taapsee Pannu filimkooda Badla ayaa laga soo bandhigay goos goos dhameestiran (Theatrical Trailer) waana goos goos aad looga helay oo si heer sare ah loo diyaariyay kuguna qasbaayo mashruucan daawashadiisa inaad sugi weysid.
Filimka Badla waxaa Director ka ah Sujoy Gosh halka Gauri Khan soo saare ka tahay waxaana la daawan doonaa 8 Maarso 2019 ayadoo ay haatan bilaabatay hadal heynta filimkan waxaana laga soo bandhigay goos goos saameyn adag leh dadka oo dhana la wada dhaceen bandhiga Big Bachchan iyo Taapsee Pannu.
Filimka Badla sheeko ahaan waxaa laga soo xigtay filimka Spanish-ka ah ee qayaanada badan The Invisible Guest (2016) kaasi oo sheekadiisa siweyn loola dhacay kana hadlaayay kiiska arimaha dilka ee qoysaska ka dhex dhaco iyo abuukaate kiiskan loo xil saarayo.
Taapse Pannu ayaa ku jileyso gabbar seygeeda dilkiisa lagu eedeenayo halka Amitabh Bachchan ku jilaayo qareen iyada difaacayo waana filim fariin qiiro badan oo qayaano u dheer tahay xambaarsan.
Amitabh iyo Taapse waxay dadka kaga yaabsadeen filimkoodii Hit-ka noqday Pink (2016) haatana waxay la imaadeen Badla oo kal sooni weyn lagu qabo inuu daawadayaasha ka gadmi karo marka tiyaatarada la saaro bisha dambe.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska filimka Badla ee qof walbo amaanayo sidoo kalena hadal heynta xoogan la yimid xili hore:
Waxaa Aqrisay 444